Ngithola kanjani i-DoF ephezulu yekhwalithi ye-BackLink ehamba phambili, ngaphandle kokubeka amazwana nokuthumela izivakashi?
Ukwakha iphrofayili yokuxhumanisa enhle kakhulu ecebile nge-DoF ephezulu. Ukulandela emuva kwe-backlink kuwumsebenzi onzima kakhulu. Kungenxa yokuthi yonke i-backlink ekhomba kuwebhusayithi yakho noma ibhulogi isasele phakathi kwezibonakaliso eziyinhloko zokucatshangelwa ezicatshangelwa yizinjini ezinkulu zokusesha ezifana ne-Google ngokwayo - primer plano fotografia. Futhi ngesizathu esithile, sivame ukubheja kokuthunyelwe kwezivakashi kanye namazwana ukuze uthole ezinye izixhumanisi ezengeziwe ze-SEO injongo, kunokuba uhlole ezinye izindlela zokwakha izixhumanisi eziphilayo. Yingakho ngenzansi ngizokukhombisa amathiphu amathathu alandelayo ukwakha izinga eliphezulu le-DoF elilandela emuva kanye nezinhlelo ezingathandwayo zokuqasha isixhumanisi.
Amathathu asetshenziswe kakhulu kepha asekhona okwenzayo ukuze athole ikhwalithi ephezuluYenza izixhumanisi emuva
Usizo U-Reporter Out (HARO)
Le webhusayithi mhlawumbe indawo engcono kakhulu yokuthola i-DoF elandelayo yekhwalithi yezinga eliphezulu kakhulu - ngokuqondile emithonjeni yemithombo ehloniphekile esebenzelana kakhulu nezindaba. Konke okudingayo lapha kungokuthi ubhalise futhi uhlale ubheka ibhokisi lakho lemeyili. Uzothola izaziso ezintathu zansuku zonke ezivela kubathengi bangempela njalo befuna izihloko ezishisayo. Njengoba kunikezwe ukuthi isihloko sihambisana niche yakho noma imboni yebhizinisi unganqikazi ukuphendula futhi unikeze ucezu oluqukethwe okuwusizo ukuze uthole amanye ama-backlink aphezulu aphezulu.
Ukubuyisela ingxenye yezinto zakho ezibonakalayo ezithakazelisayo ezibonakalayo zibe into ebonisa ngokucacile futhi ekhangayo - njenge-infographics noma amaspredishithi - iyindlela enhle yokukhuthaza izivakashi zakho zokwabelana, ukubhalisa , isizukulwane esiholela phambili, futhi ngokuqinisekile sixhumanisa nawe ngekhwalithi ephezulu ye-DoF elandela emuva. Into ethi iningi lethu lithinta ukusetshenziselwa okusebenzayo kwe-infographics yokwakha isixhumanisi semvelo. Ukudala i-infographics efanele kakhulu kuvame ukungacabangi ukuthi kuyisidingo esisebenzayo isikhathi esiphezulu. Kodwa konke kulula kakhulu kunalokho ongase ucabange. Vele usebenzise amathuluzi athile afana ne-Canva, i-Piktochart, noma i-Infogr. ngi - futhi ngiphendule lo msebenzi owawudabukisayo endabeni yemizuzu. Uma ngabe i-infographic yakho yokuqala iqedile, ungakhohlwa ukuyithumela kwelinye lamasayithi okuthunyelwe okuhlosiwe (njenge-Visual. ngithi; I-Infographics epholile; I-Infographic kuphela; I-Infographics ehlanzekile; njll. ). Noma ungase futhi ufinyelele abanye abakhudlwana be-Blogger ku-niche yakho ukuze ubanikeze i-infographic yakho yakamuva edalwe ngokuthunyelwe kwamahala wamahhala - futhi ujabulele ama-backlink aphezulu we-DoF alandelayo emuva.
Isixhumanisi sokubuyisela umsebenzi ngumsebenzi olula osebenza njengomlingo wangempela. Ngesisekelo, nansi ukuthi isebenza kanjani. Sebenzisa ithuluzi lokuhlobanisa isixhumanisi se-Buzzsumo ukuze uthole ukukhuluma mayelana negama lomkhiqizo webhizinisi lakho, iwebhusayithi, noma ibhulogi - konke okudingayo ukukhomba ukuthi ngubani ongaxhunyiwe kuwe okwamanje. Okulandelayo, sebenzisa ukufinyeleleka okusheshayo nge-imeyili ezayo njengesikhumbuzo esihloniphekile. Ukuxhumanisa ukuxhumanisa kulula futhi kuyindlela elula yokuthola i-DoF ephezulu ikhwalithi ye-backlink engakaze ibanjwe kuphrofayili yakho yokuxhumanisa ngesizathu esithile. Ngakho-ke, sekuyisikhathi sokubuyisa lokho osekufanele ukukwenza, akunjalo?